5 cunto oo ay tahay in aan lagu karin microwave | Bezzia
Tony Torres | 12/01/2022 23:55 | Nafaqeyn
Microwave-ku waa mid ka mid ah qalabka aan ka maqnayn jikada. Qalab yar oo ay ka buuxaan utility oo aanad mar walba garanayn sida saxda ah ee loo isticmaalo. Sababtoo ah guud ahaan, microwave-ka waxaa loo isticmaalaa in lagu kululeeyo cuntadalaakiin waxaa loo isticmaali karaa waxyaabo kale oo badan. Ku karinta mikrowave waa sahlan tahay, dhakhso badan, raqiis ah oo caafimaad leh, sababtoo ah waxay ku kariyaa cuntada casiirkeeda waxayna yareysaa baruurta.
Si kastaba ha ahaatee, cuntooyinka qaarkood waa in aan lagu karin microwave. Qaarkood sababtoo ah waxay si fudud u luminayaan hantidooda ugu muhiimsan iyo kuwa kale, sababtoo ah waxay khatar ku noqon kartaa caafimaadka. Soo ogow maxay yihiin cuntooyinka ay tahay inaadan waligaa ku karin microwave-ka. A) Haa, waxaad isticmaali kartaa qalabkan yar si wax ku ool ah oo maalin kasta ay ku kululeyso cuntadaada hal daqiiqo gudaheed.
1 Maxaan marnaba lagu karinin microwave-ka
1.1 Ukun adag oo la kariyey
1.4 Caanaha naaska
1.5 Khudaarta caleenta cagaaran
Maxaan marnaba lagu karinin microwave-ka
Cunto badan ayaa lagu karin karaa microwave-ka dhib la'aan, dhab ahaantii, waxaa jira cuntooyin macaan oo caafimaad leh oo aan tiro lahayn oo qaabkan ah. Si kastaba ha ahaatee, cuntooyinka ama alaabta qaarkood waa in aan sidan loo karin, sababo kala duwan dartood sida kuwa aan hoos ku sheegi doono. Ogow cuntooyinka ay tahay in aan lagu karin microwave-ka waxaadna awoodi doontaa inaad ka fogaato cabsida iyo xanaaqa.
Ukun adag oo la kariyey
Haddii aad rabto inaad diyaariso ukun shiilan oo caafimaad qaba oo aan saliid lahayn, microwave-ku waa saaxiibka ugu fiican. Laakin haddii waxa aad u baahan tahay ay tahay in aad diirin ukun adag oo la karkariyey, raadi beddelaad kale ama marka hore diyaari. Ukunta adag ee la kariyey waa in aan la gelin microwave-ka sababtoo ah lakabka qoyaanka ah ayaa ka samaysan gudaha gudaha kaas oo qarxi kara marka lagu kululeeyo microwave-ka. Sababtan awgeed, aad bay muhiim u tahay in la diiriyo ukunta oo la gooyo ka hor inta aan la gelinin kuleylka.
Haddii aan si habboon loo karin, bakteeriyada ku jirta digaagga waxay aad khatar ugu ahaan kartaa caafimaadkaaga. Sababtan awgeed, digaag cayriin waa inaan waligood lagu karin microwave, sababtoo ah nidaamka qalabkani waa inuu ku kululeeyo cuntada dibadda ilaa gudaha. Markaa sidaas cuntada laguma dammaanad qaadi karo in si habboon loo kariyo, sababtoo ah uma qabato si isku mid ah. Isla sababtaas awgeed, hilibka ceeriin waa in aan lagu karin microwave-ka.
Mid ka mid ah cuntooyinka inta badan lagu kululeeyo microwave waa bariis, dhab ahaantii, waxaa jira alaabooyin badan oo kala duwan oo baakadaysan oo loo suuq galiyo isticmaalka microwave. Si kastaba ha ahaatee, daraasado dhowaan la sameeyay ayaa tilmaamaya in tani ay aad khatar ugu tahay caafimaadka. Tani waa sababta oo ah bariiska waxaa ku jira bakteeriyo aad ugu adkaysata heerkulka sare kuwaas oo aan had iyo jeer lagu gaadhin microwave-ka. Intaa waxaa dheer, nidaamkani wuxuu abuuraa lakabka qoyaanka kaas oo ah meesha ugu fiican ee bakteeriyada kala duwan ay ku faafto taas oo keeni karta sumowga cuntada.
Caanaha naaska oo la qaboojiyo ayaa ah habka saxda ah ee loogu abuuri karo kayd cunto ee ilmahaaga. Sidan oo kale, wuxuu quudin karaa markuu u baahdo xitaa marka hooyada la waayo. Hadda, si aad u diiriso caanaha naaska, waxa fiican inaad isticmaasho biyo kulul halkii aad ka isticmaali lahayd microwave. Taas waa la wada ogsoon yahay Qalabkani waxa uu cuntada u kululeeyaa si aan sinnayn. Caanuhu waxay noqon karaan kuwo qabow dhinaca kalena aad u kulul.
Khudaarta caleenta cagaaran
Marka lagu kululeeyo microwave-ka, nafaqooyinka ku jira khudaarta caleenta cagaaran waxay aad khatar ugu noqon karaan caafimaadkaaga. Waa maado lagu magacaabo Nitrates, oo faa’iido badan u leh caafimaadka, balse marka la kululeeyo microwave-ka waxay isu rogaan nitrosamines, maado noqon karta kansar. Sidaa darteed, haddii aad haysato hadhaaga isbinaajka, kaabajka ama khudaarta cagaaran, way fiicantahay in lagu kululeeyo digsi leh dhibic saliid saytuun ah.
Kuwani waa 5 cunto oo ay tahay in aan lagu karin microwave, qalab aad u faa'iido leh haddii si sax ah loo isticmaalo. Si la mid ah, waa inay waligood noqdaan kuleylinta cuntada oo leh biyo badan, sida miraha, maadaama ay qarxi karaan ama dhalin karaan bakteeriyada qoyaanka awgeed. Talooyinkan, waxaad si badbaado leh uga faa'iidaysan kartaa qalabkaaga.
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » Caafimaadka » Nafaqeyn » 5 cunto oo ay tahay in aan lagu karin microwave
Sida loola tacaalo lamaanaha dhibaatada ka dhalatay imaatinka ilmahooda kowaad